GlobalNet | Zoom Special Price For Education
Zoom Special Price For Education
?? University များ ,International Schools များ၊ Government Schools များ ၊Training and Education Centerများ နှင့် Private School များအတွက် Special Education Price များရရှိမည့် အထူးသတင်းကောင်း Zoom Communications ကိုအသုံးပြုပြီး Virtual Classrooms များဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာသင်ကြားနိုင်ရန် Zoom Pro License များကို License Account တစ်ခုလျှင်? $90 per year ? သာကျသင့်မည် Zoom for Education Service/Packageကို Official Partnerအနေဖြင့် GlobalNetတွင် ရရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
? မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဦးထဲ Official Partner အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသော Global Technology (GlobalNet) သည် Zoom Solutions Package & Zoom Rooms Product Suite အလုံးစုံကို Official License များဖြင့် One Stop Service ရရှိနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
?ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံး အတွက် Zoom Meetings, Zoom Video Webinars အစရှိသည့် License account များ၊ Zoom Certified Engineers များမှ Zoom Room Set up ပြုလုပ်ပေးခြင်းများ အပြင် Local Partner တစ်ဦးအနေဖြင့် သုံးစွဲသူများအတွက် လွယ်ကူ အဆင်ပြေ နိုင်အောင် Zoom FREE Trainings များကိုလည်း ရယူနိင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါး အပ်ပါသည်။